Donald Payne: "Waxaan u imaanay Muqdisho sidii aan ula kulmi laheyn Madaxda Soomaaliya iyo qiimeynta xaalada dalka"
Monday, 13 April 2009 17:55 Author: Administrator
Donald Payne oo ah xubin ka tirsan Congareska Mareykanka oo manta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa Saxaafada ugu warbixiyay safarkiisa iyo ujeedada socdaalka wuxuuna sheegay in ay u yimaadeen Muqdisho sidii ay ula kulmi lahaayeen Madaxda dalka Soomaaliya iyo qiimeyn xaalada dalka ay ku sameynayeen.
“Waxaanu Magaalada Muqdisho u imaanay in aan la kulano Madaxda dalka Soomaaliya Sida Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo Wasiirada,waxaana sidoo kale halkani u imid xaalada dalka Soomaaliya in aan indhaheyga ku aragno, waxaana dareenay horumarka ay Dowladda ay ku dhaqaaqday” ayuu yiri Donald Payne.
Waxaa uu sheegay Donald Payne in sharafta iyo magaca Dowladda Soomaaliya ay ku dheelayaan kooxaha burcad badeeda, kuwaasi oo uu sheegay in looga gudbo karo sharaf xumada ay dalka u horseedayaan iyadoo la helo ciidamo Qaran oo Dowladda Soomaaliya ay sameysato.
Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharma’aarke oo isna kulankaasi kadib Wariyeyaasha la hadlayey ayaa sheegay in wafdiga ka socda Dowladda Mareykanka ay u yimaadeen dalka sidii ay u arki lahaayeen xaalada dalka uu ku sugan yahay, hadey ahaan laheyd amaanka, arrimaha bulshada iyo gargaarka bini’aadanimo.
Waxaa uu sheegay Ra’iisul Wasaaraha in waxyaabihii ay isla soo qaadeen in ay ka mid yihiin burcad badeeda iyo sida wax looga qaban karo, iyo warbixin guud oo Dowladda KMG ku saabsan, wuxuuna tilmaamay Ra’iisul Wasaaraha in Dowladda Mareykanka looga baahan yahay gurmad iyo taageero dhinaca dhaqaalaha ah.
Wafdigani ayaa dib ugu laabtay halkii ay ka soo kicitameen, iyadoo lagu sagootiyay weeraro madaafiic ah oo lala beegsaday garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Last Updated ( Monday, 13 April 2009 17:56 )